Samsung Ikike nchọpụta Kemịkalụ a ga-ekwe omume ọzọ na Galaxy Fold | Gam akporosis
Samsung patents smartphone ọhụụ ọhụrụ: ọ ga-abụ ihe ọzọ na Galaxy Fold?
Samsung kwalitere Fold Galaxy, ya mbụ mpịachi ama, ihe karịrị ọnwa abụọ gara aga, n’etiti ọnwa Febụwarị. N'oge ngosi ya, ọ dị ka ọdụ dị egwu na-adịchaghị mma ma dị ka ọkaibe, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-elekarị anya maka atụmatụ nke Mate X nke Huawei, onye na-ama ya aka.
N'oge na-adịghị mgbe ọ mara ọkwa, Samsung nyere ọtụtụ ụdị nke ngwaọrụ ndị a youtubers e ndị na-egbu egbu, ka ha mee reviews ma ga-akwalite, n'ụzọ ụfọdụ, ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na-ebu maka nkwalite ya. Otú ọ dị, ihe ahụ agachaghị nke ọma, n'ihi na nsogbu nsogbu na ihuenyo gị, nke kpughere "ntụpọ" ya ma mee ka obere ntụkwasị obi na njedebe. Mgbe nke a gasịrị, ugbu a patent ọhụrụ egosiri dị ka ihe ga-ekwe omume na ekwentị mkpakọ. Ka anyị lee ya!
Dika ihe ikike ahu gosiputara Jiri nlezianya Apple, Smartphone bụ mgbanwe n'etiti a apịaji nhazi na a unfolded nhazi. (Chọpụta: Maka nke a, agbajiri ihuenyo nke Galaxy Fold, dị ka iFixit)
Patent nke ga-ekwe omume ọzọ mpịachi ama si Samsung
Ọ na-ebukwa onye njikọ njikọ nke jikọrọ igbe mbụ na igbe nke abụọ. na, ijide otu ebe, ihe mkpọchi nke ahaziri iji gbochie ntụgharị nke igbe mbụ na igbe nke abụọ na usoro mpịachi mgbe ngwaọrụ mepere.
Mkpọchi ahụ pụtara na-agụnye mkpuchi mmịfe, nke a ga-agbanwe agbanwe tinye na igbe mbụ ma jiri slidably tinye ya na igbe nke abụọ. Ihe nkpuchi a na-apịpu nwere ike ịdọrọ n'akụkụ okporo ụzọ nke abụọ, mgbe igbe mbụ na igbe nke abụọ na-agbagharị iji mee ka ngwa ngosi mpịachi dị n'etiti nhazi apịaji na nhazi ahụ.
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ n'ezie ịhụ usoro a mechara, ma obu na ere (ma oburu na o bilie) ma obu na ngwa aru. Ka ọ dị ugbu a, ozi ahụ enyela ndụ n'ọtụtụ nkọwa, nke anyị welitere eziokwu nke ma a ga-ebido ya ma ọ bụ na ọ gaghị amalite, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-abụ ihe ọzọ doro anya nke Samsung ga-enye maka Galaxy Fold.
Galaxy Fold vs Huawei Mate X: echiche abụọ dị iche maka otu nzube ahụ
N'agbanyeghị nke ahụ, ka anyị ghara ịtụfu ama ụlọ ọrụ mpịachi mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, dịka Samsung na-emezi ya ugbu a iji malite ya n'ahịa n'oge na-adịghị anya, na-enweghị eweta nsogbu na ihuenyo ya, yabụ ọ ga-ahụ ìhè n'oge ụfọdụ. N'otu aka ahụ, eziokwu ahụ bụ na patent a bilitere bụ ihe na-egosi na adịghị anya a ga-enwe ihe nlereanya ọzọ na-abụghị Samsung, kamakwa foldable.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung patents smartphone ọhụụ ọhụrụ: ọ ga-abụ ihe ọzọ na Galaxy Fold?
Galaxy M10, M20 na M30 ga - enwe gam akporo achịcha
Asus patents gosipụtara na-egosi smartphones dị iche iche na ihe eji eme ihe